No Man’s Land(2021) – Gold Channel Movies
No Man’s Land(2021)
Ameereနဲ့ Anjaliတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက် ခိုးပြေးလာကြပြီးတော့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ တည်းခိုခန်းပိုင်ရှင်ဟာ သူ့အမေရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်နဲ့ မိခင်ရှိရာနယ်ကိုပြန်သွားရတာကြောင့် တည်းခိုခန်းမှာ မန်နေဂျာဖြစ်သူအမျိုးသမီးနဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်သာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ တည်းခိုခန်းမန်နေဂျာဖြစ်သူဟာ တည်းခိုခန်းမှာလာရောက်တည်းခိုတဲ့ ယောက်ျားလေးတိုင်းကို သွေးဆောင်ဖြားယောင်းပြီးတော့ ပျော်ရွှင်မှုဖန်တီးနေတဲ့ မိန်းမပျက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ Ameereကို နည်းမျိုးစုံနဲ့သွေးဆောင်ဖြားယောင်းဖို့ ကြိုးစားရင်း တစ်ညမှာတော့ Ameereတို့တည်းခိုနေတဲ့အခန်းဆီကိုရောက်လာပြီးတော့ အခန်းထဲကိုချောင်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ ချောင်းကြည့်နေတဲ့သူမကို Ameereမြင်သွားတဲ့အခါမှာ ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် မလွတ်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။ Ameere သူမကိုမိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ? Ameereနဲ့ Anjaliတို့ ဒီတည်းခိုခန်းမှာ ဘယ်လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ရမလဲ?…..
Translated by May Mi Kyaw, Sora & ZZZ
Reviewed by May Mi Kyaw
Download Mega HD 720p Myanmar 1.5 GB
Download Yandex SD 480p Myanmar 400MB
Download Yandex FHD 1080p Myanmar 2.4GB
Download Megaup FHD 1080p Myanmar 2.4GB
Download G Drive HD 720p Myanmar 1.5 GB
Download Mega FHD 1080p Myanmar 2,4 GB
KokoNovember 22, 2021Reply
ဇာတ်ကားပိုစတာကြီးက ရုပ်ဆိုးကြီးနဲ့ ကြည့်ကောင်းမဲ့ပုံမပေါ်ဘူး။ စကားမစပ် Gold channel app ဖွင့်လို့မရပါလား admin.
kkjNovember 22, 2021Reply
Mediafire link not seen… ? why?